OK Google, iiga boodboodka: Google Pay ee Hindiya hadda waxay iibsan kartaa dahab - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM OK Google, aniga iigayga: Google Pay in India ayaa hadda iibsan kara dahabka
Mashruuca bixinta Google ayaa sii ballaarinaya. Maalin uun kadib geliyaan waddamo cusub iyo ka dib markii ay kordhiyeen taageerada baasaska magaalooyinka badan Google Pay wuxuu awoodi karaa inuu xakameeyo lacag aan caadi aheyn. Runtii, dadka isticmaala Hindiya hadda waxay iibsan karaan oo iibin karaan dahab si toos ah taleefankooda.
Iyada oo la kaashanayo MMTC-PAMP, dadka isticmaala waxay hadda u oggolaan karaan riwaayadda 24 Google Pay. Sameynta iibsigu waa sida ugu sahlan markaad geleyso lacagta rupees iyo app wuxuu si toos ah ugu badalayaa miisaanka u dhigma. Marka macaamilku dhammeysto, biraha qaaliga ah waxaa lagu kaydiyaa sanduuq ammaan ah oo hoos imanaya magaca iibsadaha. Dabcan, waxa kale oo suurtagal ah in la isticmaalo codsiga in lagu iibiyo dahabka sicirka suuqa ugu dambeeyey, cusbooneysiiyay daqiiqad kasta.
Waa doorasho caqli badan oo Google ah, iyada oo shirkaddu ay ku dadaalayso in ay ku habboonaato bixinteeda baahida suuqa maxaliga ah. , oo ay ka mid yihiin helitaanka lamaanayaasha maxaliga Waxaan ku faraxsanahay inaan arko waxa tallaabada xigta ee loogu talagalay mashaariicda maaddaama ay sii wado koritaanka.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.androidpolice.com/2019/04/11/ok-google-bullion-me-google-pay-in-india-can-now-buy-actual-gold/
Star Wars: Qeybta IX waxay soo bandhigeysaa sheekada ugu horeysa ee rasmiga ah